Homeसमाचारघट्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार भइरहेको छ?
January 7, 2021 admin समाचार 5470
यस्तै तेजाबी सुन आज प्र’तितोला ९४ हजार ९०० रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’सङ्घले जनाएको छ । बुधबार तेजाबी सुन प्रति’तोला ९६ हजार २०० मा का’रोवार भएको थियो ।
यस्तै चाँदी प्रति’तोला १० रूपैयाँले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ३३० रूपैयाँमा कारो’वार भइरहेको छ । – खबरहब बाट
November 1, 2020 admin समाचार 7899
December 31, 2020 admin समाचार 6184
June 8, 2021 admin समाचार 2552
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222963)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211833)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209281)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195026)